Public Health in Myanmar: NGOs in the Golden Land
ကျွန်တော် စေတနာ့ ၀န်ထမ်း လုပ်ပေးနေတဲ့ ၀က်ဆိုဒ် အကြောင်း တစ်ခါမှ မပြောဖြစ်ဘူး။ ဘေးမှာတော့ လင့်ပေးထားပါတယ်။ ၀က်ဆိုဒ်ကို “ရွှေနိုင်ငံမှအန်ဂျီအိုများ” လို့ ကင်ပွန်းတတ်ထားတယ်။ ဗုဒ္ဓဟူးသားလေးပေါ့။ အသက်က တစ်နှစ်ကျော်လောက် ရှိပြီ။ ပါဝင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကတော့ ...
July Rosey said...
My mother has tested and I have known that she has CA. I would like to know the best and most successful surgeon for Breast Cancer(IDC) Patient to make Surgery (Modified radical mastectomy)and Radiation therapy. Who and where is the most suitable in Myanmar, Sir?